Mirayiridzo - Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
1.Chenjedzo nekushandisa kweLCD module
1-1Yambiro Yenzvimbo Yemagetsi Magetsi: Zviito zvinotevera zvinofanirwa kuitwa usati wavhura kana kugadzirisa kana kutengesa iyo LCM:
Kupfeka anti-static wrist-tambo.
Kupfeka anti-static mbatya.
Iyo anti-static pasi inogona kuiswa, kunyanya mune yakaoma uye yakaderera tembiricha [yakaderera mwando] nharaunda.
Kushandisa mudziyo une anti-static zvinhu.
1-2 Bvisa switch yemagetsi usati waisa, kubvisa kana kugadzira iyo LCM.
1-3 Kuti udzivise dambudziko reEMl, ndokumbira ubatanidze iyo LCM kumidziyo neEMC kudzivirirwa.
1-4Musiyano unofanirwa kuchinjirwa kune chaiyo mamiriro neVR kana iyo LCM ichimhanya pane yakakwira huwandu hwe tembiricha.
1-5 lt zvirinani kuve neheater yakavakirwa-mukati paLCM kugadzirisa nhanho yekuratidzira pazasi tembiricha.
1-6 Kuti udzivise kukwenya iyo LCD, ndapota usabvisa iyo inodzivirira firimu usati waisa iyo LCM.
1-7 Ndapota chengetai nzvimbo yakashanda yakachena kuchengetedza LCM kubva kune tsvina tsvina.
1-8 Ndokumbirawo musavhure iyo LCM kana yakundikana, izvo zvinogona kukanganisa kugadziriswa kwekuongororwa.
1-9 Inonzwisisika kune ultraviolet dzivisa kushandiswa kana kuratidzwa pasi pezuva kunze kwekunge ichishanda kune ultraviolet.
1-10 Kana iwe uchida kuwedzera PIN kana inochinjika yakati sandara tambo kana uchinge waitwa, ndapota chengetedza iyo welding mhedzisiro, senge ipfupi-dunhu kana yakaipa waya.
2.Kuchenjerera nekushandisa module yeOLED
2-1-1Avoid kuisa zvakawandisa zvakavhundutsa module kana kuita chero shanduko ations kana kugadzirisa kwazviri.
Usaite maburi ekuwedzera pane rakadhindwa redunhu bhodhi, shandura chimiro chayo kana chinja iyo zvikamu zveOLED kuratidza module.
2-1-3 Usabatanidze OLED yekuratidzira module.
2-1-4 Usashandise pamusoro peiyo chaiyo chiyero.
2-1-5 Usadonhedze, kukotama kana kumonyanisa OLED yekuratidzira module.
2-1-6Soldering: chete kune maI terminals.
2-1-7Storage: ndapota okuchengetera-Anti-kunofambira mberi magetsi mudziyo uye yakachena nzvimbo.
2-1-8 Zvakajairika kushandisa "Screen Saver" kuwedzera iyo hupenyu uye Usashandise gadziriso mukuumbwa kwenguva yakareba mukushandisa chaiko.
2-1-9 Usashandise yakamisikidzwa ruzivo muOLED pani yenguva yakareba, iyo wilLextend "screen burn" nguva yekuita.
2-1-10 Winstar ine mvumo yekushandura zvigadzirwa, kusanganisira R2and R3 gadzirisa resistors. (Resistors, ma capacitor uye zvimwe zvinhu zvisina basa zvichave zvakasiyana chitarisiko uye ruvara zvinokonzerwa neakasiyana suupplier.)
2-1-11 Winstar vane mvumo yekuchinja iyo PCB Rev. (Kuti ugutse kugadzikana kwekupa, manejimendi optimization uye akanakisa chigadzirwa mashandiro ... nezvimwewo, pasi pechiratidzo che not inokanganisa hunhu hwemagetsi uye zvimiro zvekunze, Winstar ine kodzero yeku gadziridza iyo vhezheni.)
2-2 Kubata Matanho
2-2-1 Sezvo panoratidzirwa pani iri kugadzirwa negirazi, usashandise zvemagetsi zvinokanganisa isu isu kudonha kubva panzvimbo yepamusoro.
2-2-2 lKana iyo inoratidzira pane! rakatyorwa neimwe tsaona uye yemukati organic chinhu inodonha, chenjera kuti usafemera mukati kana kunanzva iyo organic organic.
2-2-3Kudzvinyirira kunoiswa panzvimbo yekuratidzira kana nharaunda yaro yeOLED modha yekuratidzira, chimiro checell chinogona kukuvara uye chenjera kuti usashandise kumanikidza kune zvikamu izvi.
2-2-4 Iyo polarizer inovhara pamusoro peiyo OLED yekuratidzira module yakapfava uye nyore kukwenya.Ndapota chenjera kana uchibata iyo OLED yekuratidzira module.
2-2-5 Kana iyo yepamusoro polarizer yeOLED yekuratidzira module ine ivhu, chenesa pamusoro. It inotora mukana nekushandisa inotevera adhesion tepi.
Scotch Kugadzirisa Tepi No. 810 kana yakaenzana
Usamboedza kufemera pamusoro penzvimbo yakasviba kana kupukuta pamusoro uchishandisa jira rine solvent
senge ethylalcohol, nekuti pamusoro peiyo polarizer ichaita makore. Uyezve, teerera
kuti inotevera mvura uye solvent inogona kukanganisa iyo polarizer:
2-2-6 Bata OLED yekuratidzira module zvakanyatsonaka paunenge uchiisa OLED moduru yekuratidzira mu Sisitimu yekugara. Usashandise kunyanyisa kunetseka kana kumanikidza kuOLED kuratidza module Uye, usadaro pamusoro pekukotamisa iyo firimu ine elekitirodhi dhizaini dhizaini.Izvi zvinonetsa zvinokanganisa kuratidzwa Zvakare, chengetedza kuomarara kwakaringana kwemakesi ekunze.
2-2-7 Usashandise kushushikana kune LSI machipisi uye akapoteredzwa akaumbwa zvikamu.
2-2-8Do kwete kukatanura kana kugadzirisa iyo OLED yekuratidzira module.
2-2-9 Usashandise masaini ekuisa apo simba remafungiro rakadzimwa.
2-2-10 Teerera zvakakwana kumatunhu anoshanda kana uchipa OLEDdisplay module kudzivirira kuitika kwezviitiko zvekupaza njodzi nemagetsi emagetsi.
Ive neshuwa yekumisa muviri wemunhu uchibata kana uchibata maOLED ekuratidza ma module.
Ive neshuwa kune epasi maturusi ekushandisa kana kuungana senge soldering ayoni.
Kudzvinyirira kugadzirwa kweiyo static eleetricity, dzivisa kuita basa regungano pasi pakaoma nharaunda.
Inodzivirira firimu iri kuiswa kumeso kwepaneru yekuratidzira yeOLED kuratidza Chenjera nekuti static magetsi anogona kugadzirwa kana uchibvisa firimu rinodzivirira.
2-2-11 Dziviriro firimu irikushandiswa kumeso kwepaneru yekuratidzira uye inobvisa iyo Kudzivirira firimu usati waunganidza iyo.Pari zvino, kana iyo OLED yekuratidzira module yave iri yakachengetwa kwenguva yakareba, zvisaririra zvekunamira zvinhu zvemufirimu wekudzivirira zvinogona kuramba zviripo pamusoro pepaneru rekuratidzira mushure mekubviswa kwemufirimu Pakadaro, bvisa zvasara zvinhu nenzira yakaunzwa muChikamu chiri pamusoro 5.
2-2-12.Kana magetsi aripo akaiswa apo OLED yekuratidzira module iri kutorwa kana kana iri akaiswa pasi pakakwirira mwando nharaunda, maelekitirodhi anogona kukanganiswa uye chenjera nzvenga zviri pamusoro.
3-1 Paunenge uchichengetera OLED kuratidza ma module, uiise mumagetsi emagetsi ekudzivirira mabhegi achidzivirira kusvikirwa nezuva rakananga kana kumwenje yemwenje ye fluorescent. uye, zvakare, kunzvenga yakakwirira tembiricha uye yakanyanya mwando nharaunda kana yakadzika tembiricha (isingasviki 0 ° C) nharaunda.
4. Pixel Tsanangudzo
Tarira1: Kana pixel kana kukwana sub-pixel zvikanganiso zvichipfuura 50% yeiyo yakakanganiswa pixel kana sub-pixel nzvimbo, icha inofungidzirwa se1 chirema.
Note2: Hapafanire kuve neakasarudzika asiri-kufanana kunoonekwa kuburikidza5% ND Firita mukati me2 sec nguva dzekuongorora.
Note3: Mura uye yakajeka dot yakaongororwa kuburikidza5% kufambisa ND Filter seinotevera.